चल्तीमा अनलाइन चेस- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
चल्तीमा अनलाइन चेस
असार १६, २०७७ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — मार्सल आर्ट्समा विशेषगरी फाइटका स्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्नैपर्छ । यसमा एकले अर्कालाई किक–पन्च प्रहार गर्ने र टेक्निक लगाएर पछार्ने हुन्छ ।
फुटबल, बास्केटबललगायत टिम गेममा पनि प्रतिस्पर्धी गरिरहँदा दुई टिमका खेलाडीको शारीरसँग सम्पर्क हुन जान्छ नै ।
चेस (बुद्धिचाल) भने यस्तो खेल हो जहाँ आफ्नो टिम वा प्रतिस्पर्धीसँग शारीरिक रूपमा सम्पर्क हुँदैन । तर यस खेललाई पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले असर गरेको छ । यसबीच चेसको अनलाइन प्रतिस्पर्धा बाक्लिएको छ । सरकारले महामारीका कारण चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेयता चेसको गतिविधिबारे नेपाल बुद्धिचाल संघका सचिव धरमबहादुर लामाले भने, ‘नेपालमा वार्षिक रूपमा झन्डै १ सय प्रतियोगिता हुन्छ । त्यसमध्ये संघको अफिसियल प्रतियोगिता ४–५ वटा हुन्छ । अरू प्रतियोगिता जिल्ला, क्लब र संस्थाहरूले गर्छन् । लकडाउन लागू भएपछि खेलाडीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट बन्द भए पनि विभिन्न संस्था र क्लबहरूले ५० वटा जति अनलाइन चेस प्रतियोगिता गरिसकेका छन् ।’
संघले पनि अनलाइन प्रतियोगिताको घोषणा गरेको छ, नेसनल अनलाइन चेस च्याम्पियनसिप । विभिन्न उमेर समूहमा महिला र पुरुषको गरी १५ स्पर्धा समावेश गरिएको यो च्याम्पियनसिप असार १९ देखि साउन २८ गतेसम्म चल्नेछ । ‘मानिस उपस्थित भएरै खेल्ने प्रतियोगिता आयोजना गर्न सरकारको इजाजत लिनुपर्छ, जुन यसबेला सम्भव छैन,’ सचिव लामाले भने, ‘विश्व बुद्धिचाल महासंघ (फिडे) तथा एसियाली बुद्धिचाल महासंघले पनि जुलाई २०२० सम्म एउटै स्थानमा भेला भएर खेल्ने प्रतियोगिता स्थगित गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । त्यसैले हामी पनि अनलाइन प्रतियोगितामै गएका हौं ।’
शारीरिक रूपमा एउटै स्थलमा भेला भएर खेल्नु र अनलाइनमार्फत प्रतिस्पर्धा गर्नुमा के फरक ? ‘कोभिड–१९ का कारण अहिले एकअर्कालाई भेट्न र समूहमा रहेर खेल्न मिल्दैन । भर्चुअल भए पनि खेल्न सकिरहेका छौं, मुख्य यही हो,’ आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी सुजना लोहनी भन्छिन्, ‘बोर्ड चाहिँदैन, इन्टरनेट भएपछि अनलाइन चेस जहाँ बसेर पनि खेल्न सकिन्छ ।’ अनलाइन चेस खेल्दा खेलाडीले कम्प्युटर प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सुजनासहित नेपालका ६ खेलाडीले गत महिना सम्पन्न एसियन जुनियर एन्ड गर्ल्स अनलाइन चेस च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जहाँ उनीहरूको चुनौती जोनल ३.२ को छनोटमै टुंगिएको थियो । २० वर्षीया सुजनाले स्वदेशमा भएका अनलाइन चेस प्रतियोगिता बिरलै गुमाएकी छन् । भन्छिन्, ‘यो बेला खासै काम छैन । त्यसैले धेरै खेलेकी छु । २–३ वटा प्रतियोगितामात्रै खेलिनँ । मुख्य स्पर्धामा एकपल्ट दोस्रोसम्म भएँ, शीर्ष २० मा २–३ पल्ट छिरेकी छु ।’ उनले थपिन्, ‘शारीरिक रूपमा एउटै ठाउँमा उपस्थित भएर खेल्दा मानसिक रमाइलो लाग्थ्यो । घरमै बसेर खेल्दा फ्रेस महसुस भएन, त्यति रमाइलो चाहिँ लागेको छैन । तर, यात्रा गर्दाको थकान पनि भोग्नुपरेको छैन । यस बेला धेरै अभ्यास गर्न पाएकी छु ।’
नेसनल अनलाइन चेस च्याम्पियनसिपको लागि संघले खेलाडी दर्तालगायतका सबै प्रक्रिया पनि अनलाइनबाटै गरेको छ । आयोजक कमिटीको भर्चुअल बैठक हरेक दिन दिउँसो १ बजे र बेलुकी ८ बजे भइरहेको छ । ‘सोमबारसम्म ७८ खेलाडीले नाम दर्ता गरेका छन्,’ सचिव लामाले भने, ‘सुरुका दुई स्पर्धाका लागि २७ जना खेलाडी भइसकेका छन् ।’ प्रतियोगिता स्विस प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुनेछ ।
संघ आफैंले पहिलोपल्ट आयोजना गर्न लागेको भर्चुअल प्रतियोगितामा महिला र पुरुषका यू–८, यू–१०, यू–१२, यू–१४, यू–१६, यू–१८ र यू–२० गरी १४ स्पर्धा समावेश गरिएको छ भने ५० वर्षमाथिका खेलाडीले भेट्रानको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । संघले जनाएअनुसार सप्ताहन्तका रूपमा प्रतियोगिता हुनेछ र यस्तोमा महिलाको स्पर्धा शुक्रबार हुनेछ भने पुरुष खेलाडीले शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
महामारीका कारण खेल गतिविधि ठप्प हुनुअघि नेपालमा भएको चेसको अन्तिम हो, पीबी थापा स्मृति केसीसी इन्टरनेसनल ओपन । नाइट चेस क्लबले झापाको काँकडभिट्टामा फागुन २१–२५ मा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र बंगलादेशका १ सय ३२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । संघ आफैंले औपचारिक प्रतियोगिताको रूपमा गत कात्तिकमा १५ हजार ५ सय डलर पुरस्कारको एसियन एमेच्योर चेस च्याम्पियनसिप र साउनमा टिम च्याम्पियनसिप गरेको थियो । सचिव लामाले भने, ‘सन् २०२० को तालिका तयार गरिसकेका छौं । महिला र पुरुषका खुला राष्ट्रिय प्रतियोगिता र ट्रेनिङहरू छठपछि हुनेछन् ।’
नेपालमा फिडे रजिस्टर्ड खेलाडी ३,२४३ जना छन् भने रेटेड (फिडेको वरीयताप्राप्त) खेलाडी संख्या ९२२ छ । संघको चुनावी साधारणसभा पनि लकडाउनको कारण स्थगित भयो, जुन चैत २९ लाई तोकिएको थियो । त्यसयता अर्को मिति तय गरिएको छैन ।
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०८:५५
५०० विकेटनजिक ब्रोड
बिनादर्शक खेल्ने ब्रोडलाई बानी नै छैन, यसपल्ट यही पृष्ठभूमिमा नखेलेर सुख पनि छैन
असार १६, २०७७ द गार्डियन
लन्डन — आँखा चिम्लेर एकपल्ट स्टुवार्ट ब्रोडले खेलेका उत्कृष्ट क्षण सम्झौं त ? त्यो दृश्यमा दृश्य मात्र छैन, आवाज पनि छ ।
इंग्लिस बलर स्टुवार्ट ब्रोड । दायाँ तस्बिरमा उनी पिता क्रिस ब्रोडका साथ । तस्बिर : एजेन्सी
सन् २००९ को ओभल । सन् २०११ मा भारतविरुद्ध ह्याट्रिक । सन् २०११ मा ट्रेन्ट ब्रिजमा भएको खेलको बिहानी सेसन । र, सन् २०१६ मा जोहानेसबर्ग । यी दृश्यमा ब्रोड ब्याट र बलमा बोलेको हेर्न पाइन्छ । अनि पृष्ठभूमिमा पूरा भरिएको रंगशालाका दर्शकको आवाज पनि । टेस्ट क्रिकेट भनेको यस्तै हुन्छ र यसमा ब्रोड खुबै सुहाउने खेलाडी हुन् ।
अर्को साताको बुधबारबाट वेस्ट इन्डिजविरुद्धको टेस्ट सिरिज सुरु हुँदै छ । ब्रोड खुबै मन लगाएर सोचिरहेका छन्, दर्शकविनाको खेल कस्तो हुँदो हो ? उनी भन्छन्, ‘म त चिन्तित छु भन्दा हुन्छ ।’ साउथह्याम्पटनको अगेस बाउलमा उनी अभ्यासरत छन् र यो प्रशिक्षक ‘बायो सेक्योर’ छ । ‘म त्यही बेला राम्रो खेल्छु, जतिबेला खेल रोमाञ्चक मोडमा हुन्छ । अभ्यास खेलमा भन्दा म पक्कै पनि एसेज सिरिजमा राम्रो गर्छु । ठूला अवसरमा म बढी खुल्ने गर्छु,’ ब्रोड भन्छन् ।
यो महिनाको सुरुदेखि उनी एउटा काममा खुबै व्यस्त छन् । यो हो, मनोविज्ञ डेविड योङसँग ठोस सरसल्लाह । बिनादर्शक खेल्ने ब्रोडलाई बानी नै छैन तर यसपल्ट यही पृष्ठभूमिमा नखेलेर सुख पनि छैन । उनी भन्छन्, ‘यस्ता परामर्शले राम्रो काम गर्ने रहेछ । अहिले हामी बढी ब्याट्सम्यान र बलरको कमजोरीप्रति केन्द्रित छौं । अबको सिरिजमा हामीलाई समर्थकको साथ हुन्न । हामी निश्चिन्त हुन चाहन्छौं, दर्शनबिनाको टेस्ट सिरिजमा ।’
क्रिकेटको सबै कालखण्डमा विपक्षी खेलाडीसँगको गरम जोसको प्रतिद्वन्द्विताले फाइदा नै गरेको छ । वेस्ट इन्डिज टिमका कप्तान जेसन होल्डर र ब्रोडबीचको सम्बन्ध यस्तै छ, अलिकति माया र अलिकति घृणा । दुवै एकापसमा मुखामुख हुने गरेका छन्, चर्को शब्दको मद्दतले । त्यसैले ब्रोड भन्छन्, ‘यसपल्ट यो संघर्ष चल्नेछ । तर यो बीचमा बुबाको उपस्थितिले अलिकति गाह्रो बनाएको छ ।’
भएको के छ भन्दा वेस्ट इन्डिजबीचको सिरिजमा म्याच रेफ्री हुनेछन्, क्रिस ब्रोड । अर्थात् उनका बुबा । उनी अर्को स्थिति बुझ्न पनि आतुर छन् । पहिलो टेस्ट सुरु हुने जुलाई ८ को बिहान लगभग शान्त र शून्य स्थितिमा कसरी खेल सुरु हुनेछ त ? त्यसो त काउन्टी क्रिकेटमा पनि अपार दर्शक कहाँ हुने हो र ? कहिलेकाहीं त हातैले दर्शक पनि गन्न सकिन्छ । त्यसैले कम्तीमा इंग्लिस टिम भाग्यमानी मान्नुपर्छ, यसले जहाँ–जहाँ खेल्छ, त्यहाँ दर्शकको अभाव हुन्न । उनका लागि त अहिले फेरि क्रिकेट सुरु हुनु पनि ठूलै उपलब्धि रहेको छ, नत्र यो सिरिज पनि हुने नहुने टुंगो थिएन ।
ब्रोड ३४ वर्षका भइसके । सायद अब उनको खेलजीवन धेरै लामो छैन । उनका लागि सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो, ५ सय विकेट । अहिले नै उनले ४ सय ८५ विकेट लिइसके, त्यसैले त्यो उपलब्धिको उनी नजिक छन् । यो कम्ती ठूलो उपलब्धि होइन, टेस्ट क्रिकेटमा ५ सय विकेटले खास अर्थ राख्छ । उनी यो उपलब्धि गुमाउन चाहँदैनन् । फेरि यो सिरिजमा राम्रो गर्न सकेनन् भने ब्रोड निश्चिन्त छैनन्, फेरि फेरि मौका पाउँछु भन्नेमा । त्यसैले उनी दर्शनबिना खेल्न पनि तम्तयार छन् ।
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०८:५३